ဒဂုံမြို့ သစ် မြောက်ပိုင်းရှိငှါးရန်ကွန်ဒိုများ | iMyanmarHouse.com
ENGLISH | မြန်မာ
ကြော်ငြာတင်ရန် | Login | Sign Up
ကြိုပွိုင့် တိုက်ခန်း ကွန်ဒိုများ
အိမ် ရှာဖွေသူများ Wanted Listing
အိမ် ဝယ်ရန် ရှာဖွေနေသူများ
အိမ် ငှါးရန် ရှာဖွေနေသူများ
Wanted Listing တင်ရန်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု ကိန်းဂဏာန်းများ
ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဆောက်လုပ်လိုသူများအတွက် အထူးအခွင့်​ အ​ရေး
အိမ်ခြံမြေ ဥပဒေ ဝန်ဆောင်မှုများ
စတုရန်းပေမှ ဧက တွက်ချက်ရန်
ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခတ်ကမ်းခြေရှိ နာမည်ကြီး Wyndam ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း
ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခတ်ကမ်းခြေရှိ နာမည်ကြီး Wyndam ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွင်
ရောင်းရန် ငှါးရန် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ အကျိုးဆောင်များ အဆောင်များ
ဒဂုံမြို့ သစ် မြောက်ပိုင်း
ရောင်းရန် ငှားရန် ကြိုပွိုင့် အဆောင်များ
မြို့ နယ်အားလုံးလမ်းမတော်လသာကျောက်တံတားပန်းပဲတန်းပုဇွန်တောင်အလုံကြည့်မြင်တိုင်စမ်းချောင်းဗဟန်းဗိုလ်တထောင်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တာမွေရန်ကင်းဒဂုံဒဂုံမြို့ သစ် အရှေ့ ပိုင်းဒဂုံမြို့ သစ် မြောက်ပိုင်းဒဂုံမြို့ သစ် တောင်ပိုင်းဒဂုံမြို့ သစ် ဆိပ်ကမ်းကမာရွတ်အင်းစိန်လှိုင်လှိုင်သာယာမရမ်းကုန်းမင်္ဂလာဒုံမြောက်ဥက္ကလာပတောင်ဥက္ကလာပသင်္ဃန်းကျွန်းသာကေတသံလျင်ဒလဒေါပုံမှော်ဘီလှည်းကူးထန်းတပင်ကော့မှူးခရမ်းကွမ်းခြံကုန်းရွှေပြည်သာတိုက်ကြီးသုံးခွတွံ့ တေးကျောက်တန်းဆိပ်ကြီးခနောင်တိုပုလဲမြို့ သစ်
အမျိုးအစားအားလုံး တိုက်ခန်း ကွန်ဒို လုံးချင်းအိမ် မြေကွက် ၊ ခြံကွက် ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း စက်မှု့ဇုန် ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင်
ဈေးနှုန်း (မှ) 1 (သိန်း)2 (သိန်း)3 (သိန်း)4 (သိန်း)5 (သိန်း)6 (သိန်း)7 (သိန်း)8 (သိန်း)9 (သိန်း)10 (သိန်း)
ဈေးနှုန်း (အတွင်း) 1 (သိန်း)2 (သိန်း)3 (သိန်း)4 (သိန်း)5 (သိန်း)6 (သိန်း)7 (သိန်း)8 (သိန်း)9 (သိန်း)10 (သိန်း)10 (သိန်း) နှင့်အထက်
Filter by Property type: တိုက်ခန်း | ကွန်ဒို | လုံးချင်းအိမ် | မြေကွက် ၊ ခြံကွက် | ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း | စက်မှု့ဇုန်
နေ့စဉ် အပတ်စဉ် လစဉ် မပေးပါနှင့်
ဒဂုံမြို့ သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိငှါးရန်ကွန်ဒိုများ
မြို့နယ် ဒဂုံမြို့ သစ် မြောက်ပိုင်း
အစီအစဉ် : မူလ အတိုင်း ဈေးနှုန်း အနည်း မှ အများ အဟောင်း မှ အသစ် အသစ် မှ အဟောင်း
Bo Min Yaung Housing For Rental
ဒဂုံမြို့ သစ် မြောက်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2.50 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18717088 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09 5194191, 09 450118055, 017539983, 017539984
iMyanmarHouse.com တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
BoNadii Real Estate ပိတ်ရန်
10 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18694425 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဂရိတျပွညျတျောသဈ အိမျ ခွံ မွေ လုပျငနျး ပိတ်ရန်
ပင်လုံကွန်ဒိုတွင် (1710sqft) အကျယ်ရှိအခန်းအမြန်ငှားမည်။
13 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18689967 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
View Point Real Estate Service Co.,Ltd. ပိတ်ရန်
မွောကျဒဂုံ 42ရပျကှကျ ဗိုလျမငျးရောငျအိမျရာ liftပါ အမွနျငှားမညျ
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18685544 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09887177589 09759800759 09664926906
9 Real Estate ပိတ်ရန်
Pin Lon Village Residence
$ 1,800 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18581319 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09 4310 8920 , 09 45030 3770, 09 45030 3880,
ကြယ်စင်လင်း (အိမ်ခြံမြေ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း) ပိတ်ရန်
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ် လူနေ ရုံခန်းဖွင့်ရန်ကောင်းသော minicondo အငှား
3 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18573992 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09444760032, 09444760034, 09444760037
Aung Myay Yadanar Real Estate ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18556178 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18552100 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
PinLon Villa Condo Nice Room For Rent(လူနေ ရုံးခနျးအထူးသငျ့တျောသညျ့အခနိးလေးဌားမညျ
$ 1,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18539104 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Barani Real Estate ပိတ်ရန်
6 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18528128 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
စောရောဘတ် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် ပိတ်ရန်
ရန်ကုန်မြို့၏ တိုးချဲ့မြို့သစ်တွင် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်သည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည် ။ အကျယ်အဝန်း ၂၆.၂၈ ကီလိုမီတာရှိပြီး မြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်နှင့်မြောက်ဘက်တွင် ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ အနောက်ဘက်တွင် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ တောင်ဘက်တွင် ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း တို့ ဝန်းရံတည်ရှိသည် ။ မြောက်ဒဂုံသည် ရပ်ကွက်ပေါင်း ၂၀ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီး မူလတန်းကျောင်း ၂၄ ကျောင်း ၊ အလယ်တန်းကျောင်း (၁) ကျောင်း နှင့် အထက်တန်းကျောင်း (၄) ကျောင်းတို့ရှိသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည့် ဒဂုံတက္ကသိုလ် တည်ရှိသောမြို့နယ်လည်းဖြစ်သည် ။ တိုးချဲ့မြို့သစ် ဖြစ်တာနဲ့အညီ မြေကွက်များ ၊ မြေလွတ်များ ၊ စက်မှုဇုန်များ အများအပြားတည်ရှိသည် ။ ရန်ကုန်ဘူတာကြီးက တဆင့် ဒဂုံတက္ကသိုလ်အထိ တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည့် ရထားလမ်းလည်းတည်ရှိသည် ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်း ရှိသည့်အတွက် မြို့နယ်စုံ ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများတက်ရောက်သည့်အတွက် ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွင် စည်ကားသောမြို့နယ်ဖြစ်သည် ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ ငှားရမ်းနေထိုင်သည့် အဆောင်လည်း အများအပြားတည်ရှိပြီး မော်တော်ယာဉ်လိုင်းပေါင်းစုံ လာရောက်ပြေးဆွဲသည့်အတွက် သွားလာရလွယ်ကူ သောမြို့နယ်လည်းဖြစ်သည် ။ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည့် မြို့ပြနှင့်အတူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အိမ်ခြံမြေ လုပ်ငန်းရှင်များ ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် ကောင်းသော မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ဖြစ်သည် ။
ဒဂုံမြို့ သစ် အရှေ့ ပိုင်း
ဒဂုံမြို့ သစ် တောင်ပိုင်း
ဒဂုံမြို့ သစ် ဆိပ်ကမ်း
Copyright © 2020 iMyanmarHouse.com. All Rights Reserved.